အင်ဆစ်ဂနီ ဟာ အင်တာမီလန် ရဲ့ လူကာကူ ခေါ်ယူရေးမှာ ဘာကြောင့် အရေးပါနေခဲ့သလဲ . . . . — Sports Myanmar
အင်ဆစ်ဂနီ ဟာ အင်တာမီလန် ရဲ့ လူကာကူ ခေါ်ယူရေးမှာ ဘာကြောင့် အရေးပါနေခဲ့သလဲ . . . .
July 6, 2019 - by Edi Tor
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း တိုက်စစ်မှုး လူကာကူ ကို အင်တာ မီလန် အသင်း ကြိုးစား နေခဲ့တာ အပြောင်း အရွှေ့ ကာလ တစ်ခု လုံး လိုလို ပါပဲ ။ ယူနိုက်တက် ဘက်က အင်တာ မီလန် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု မှန် သမျှ ကို အကြိမ် ကြိမ် ပယ်ချ နေပြီး ငွေသား သီးသန့် ကမ်းလှမ်းမှု ကိုသာ တောင်းဆို နေခဲ့တာ ကြောင့် အပြောင်း အရွှေ့ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ကြန့်ကြာ နေခဲ့ရတာ ပါ ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒီ ကိစ္စ တွေ ပြည်လည် တော့မယ့် ပုံ ပါပဲ . . .
မနေ့ ည ပိုင်း မှာ ထွက်ပေါ် လာတဲ့ သတင်း အရ နာပိုလီ အသင်း ဟာ အင်တာ မီလန် တိုက်စစ်မှုး အီကာဒီ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ အတွက် စတင်ကြိုးပမ်း တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ငွေသား ပေါင် ၅၄ သန်း အပြင် တိုက်စစ်မှုး အင်ဆစ် ဂနီ ကို ပါ အလိုက်ပေး သွားဖို့ ရှိနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
Inter’s Argentinian forward Mauro Icardi (C up) fights for the ball with Napoli’s Senegalese defender Kalidou Koulibaly during the Italian Serie A football match Napoli vs Inter Milan at the San Paolo Comunal Stadium in Naples, on May 19, 2018. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
ဒါဟာ အင်တာ မီလန် အသင်း အတွက် တစ်ချက်ခုတ် ၊ ၃-၄ ချက် ပြတ်မယ့် အနေ အထားမျိုး ဖြစ်လာ စေခဲ့ ပါတယ် ။ အင်တာ မီလန် ဟာ အီကာဒီ ကိုရော ကွင်းလယ်လူ နိုင်ဂိုလန်း ကိုပါ အသင်းရဲ့ အစီအစဉ် တွေ ထဲ မှာ မပါတော့ ဘူးလို့ မနေ့ည က အသိပေး ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ် ။ ဆိုလိုတာ ကတော့ အသင်း ပြောင်းဖြစ်သည် ဖြစ်စေ ၊ မပြောင်းဖြစ်သည် ဖြစ်စေ သူတို့ ၂ ဦး စလုံး အင်တာ အတွက် ကစားရတော့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီလို အခြေအနေ မှာ နာပိုလီ က အီကာဒီ အတွက် အင်ဆစ်ဂနီ + ငွေသား နဲ့ ကမ်းလှမ်း လာခဲ့ ပါတယ် ။ နာပိုလီ ဟာ မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုး လူကာကူ ကိုလည်း စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့ သိရ ပေမယ့် လက်ရှိ အနေ အထား မှာတော့ စီးရီးအေ နဲ့ အသားကျပြိး ဖြစ်တဲ့ အီကာဒီ ကို ပိုပြီး လိုလား နေပုံ ပါပဲ ။ ဒီ ကမ်းလှမ်းမှု သာ တရားဝင် ဖြစ်လာခဲ့ ရင် အင်တာ အတွက် ချက်ချင်း ခေါင်းငြိမ့်သင့်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လာမှာပါ ။
Napoli’s Italian striker Lorenzo Insigne controls the ball during the UEFA Europa League quarter final, first leg, football match between Arsenal and Napoli at the Emirates Stadium in London on April 11, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
အီကာဒီ ကို သာ နာပိုလီ ကို ရောင်းထုတ် ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် လူကာကူ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ အတွက် ငွေသား အကူ အညီ ရလာစေ မှာပါ ။ ဒါ့အပြင် အင်ဆစ် ဂနီ ဟာလည်း အထောင် တိုက်စစ်မှုး ထက် နောက်ချန် တိုက်စစ်မှုး ၊ တောင်ပံ အဖြစ် ကစားတာ များသူ ဖြစ်တာ ကြောင့် လူကာကူ နဲ့ နေရာလုဖက် ဖြစ်လာ ဖို့ မရှိ နိုင်တာ ကလည်း အင်တာ အတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစား လာနိုင်တဲ့ အချက် ဖြစ် ပါတယ် ။
နာပိုလီ အသင်း ဘက် မှာလည်း နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုတွေ အောက် မှာ ဂိုးသွင်း သေချာတဲ့ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး ကို လိုအပ် နေခဲ့တာ ကြောင့် အီကာဒီ ၊ လူကာကူ တို့ လို စစ်မှန်တဲ့ အထောင် တိုက်စစ်မှုးတွေ ကို စိတ်ဝင် စားနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူကာကူ ကို စိတ်ဝင်စား လာတယ် ဆိုတာလည်း နာပိုလီ ဘက်ကနေ အီကာဒီ ကို ရဖုိ့ ဆင်တဲ့ အကွက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
Manchester United’s Belgian striker Romelu Lukaku (C) shoots to score their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Southampton at Old Trafford in Manchester, north west England, on March 2, 2019. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
ဒီ အပြောင်း အရွှေ့ တကယ် ဖြစ်လာ မယ် ဆိုရင်တော့ အင်တာရော နာပိုလီ ရော မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရော ၃ သင်း စလုံး စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိ စေမှာ အသေ အချာ ပဲ ဖြစ် ပါလိမ့်မယ် ။
အငျဆဈဂနီ ဟာ အငျတာမီလနျ ရဲ့ လူကာကူ ချေါယူရေးမှာ ဘာကွောငျ့ အရေးပါနခေဲ့သလဲ . . . .
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး တိုကျစဈမှုး လူကာကူ ကို အငျတာ မီလနျ အသငျး ကွိုးစား နခေဲ့တာ အပွောငျး အရှေ့ ကာလ တဈခု လုံး လိုလို ပါပဲ ။ ယူနိုကျတကျ ဘကျက အငျတာ မီလနျ ရဲ့ ကမျးလှမျးမှု မှနျ သမြှ ကို အကွိမျ ကွိမျ ပယျခြ နပွေီး ငှသေား သီးသနျ့ ကမျးလှမျးမှု ကိုသာ တောငျးဆို နခေဲ့တာ ကွောငျ့ အပွောငျး အရှေ့ ဖွဈပျေါဖို့ ကွနျ့ကွာ နခေဲ့ရတာ ပါ ။ ဒါပမေယျ့ အခုတော့ ဒီ ကိစ်စ တှေ ပွညျလညျ တော့မယျ့ ပုံ ပါပဲ . . .
မနေ့ ည ပိုငျး မှာ ထှကျပျေါ လာတဲ့ သတငျး အရ နာပိုလီ အသငျး ဟာ အငျတာ မီလနျ တိုကျစဈမှုး အီကာဒီ ကို ချေါယူ ဖို့ အတှကျ စတငျကွိုးပမျး တော့မှာ ဖွဈပွီး ငှသေား ပေါငျ ၅၄ သနျး အပွငျ တိုကျစဈမှုး အငျဆဈ ဂနီ ကို ပါ အလိုကျပေး သှားဖို့ ရှိနတေယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
ဒါဟာ အငျတာ မီလနျ အသငျး အတှကျ တဈခကျြခုတျ ၊ ၃-၄ ခကျြ ပွတျမယျ့ အနေ အထားမြိုး ဖွဈလာ စခေဲ့ ပါတယျ ။ အငျတာ မီလနျ ဟာ အီကာဒီ ကိုရော ကှငျးလယျလူ နိုငျဂိုလနျး ကိုပါ အသငျးရဲ့ အစီအစဉျ တှေ ထဲ မှာ မပါတော့ ဘူးလို့ မနညေ့ က အသိပေး ထုတျပွနျ ခဲ့ပါတယျ ။ ဆိုလိုတာ ကတော့ အသငျး ပွောငျးဖွဈသညျ ဖွဈစေ ၊ မပွောငျးဖွဈသညျ ဖွဈစေ သူတို့ ၂ ဦး စလုံး အငျတာ အတှကျ ကစားရတော့ မှာ မဟုတျပါဘူး ။
ဒီလို အခွအေနေ မှာ နာပိုလီ က အီကာဒီ အတှကျ အငျဆဈဂနီ + ငှသေား နဲ့ ကမျးလှမျး လာခဲ့ ပါတယျ ။ နာပိုလီ ဟာ မနျယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှုး လူကာကူ ကိုလညျး စိတျဝငျစား နတေယျ လို့ သိရ ပမေယျ့ လကျရှိ အနေ အထား မှာတော့ စီးရီးအေ နဲ့ အသားကပြွိး ဖွဈတဲ့ အီကာဒီ ကို ပိုပွီး လိုလား နပေုံ ပါပဲ ။ ဒီ ကမျးလှမျးမှု သာ တရားဝငျ ဖွဈလာခဲ့ ရငျ အငျတာ အတှကျ ခကျြခငျြး ခေါငျးငွိမျ့သငျ့တဲ့ ကိစ်စ ဖွဈလာမှာပါ ။
အီကာဒီ ကို သာ နာပိုလီ ကို ရောငျးထုတျ ဖွဈခဲ့မယျ ဆိုရငျ လူကာကူ ကို ချေါယူ ဖို့ အတှကျ ငှသေား အကူ အညီ ရလာစေ မှာပါ ။ ဒါ့အပွငျ အငျဆဈ ဂနီ ဟာလညျး အထောငျ တိုကျစဈမှုး ထကျ နောကျခနျြ တိုကျစဈမှုး ၊ တောငျပံ အဖွဈ ကစားတာ မြားသူ ဖွဈတာ ကွောငျ့ လူကာကူ နဲ့ နရောလုဖကျ ဖွဈလာ ဖို့ မရှိ နိုငျတာ ကလညျး အငျတာ အတှကျ ထညျ့သှငျး စဉျးစား လာနိုငျတဲ့ အခကျြ ဖွဈ ပါတယျ ။
နာပိုလီ အသငျး ဘကျ မှာလညျး နညျးပွ အနျဆယျလော့တီ ရဲ့ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲ မှုတှေ အောကျ မှာ ဂိုးသှငျး သခြောတဲ့ တိုကျစဈမှုး တဈဦး ကို လိုအပျ နခေဲ့တာ ကွောငျ့ အီကာဒီ ၊ လူကာကူ တို့ လို စဈမှနျတဲ့ အထောငျ တိုကျစဈမှုးတှေ ကို စိတျဝငျ စားနခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ လူကာကူ ကို စိတျဝငျစား လာတယျ ဆိုတာလညျး နာပိုလီ ဘကျကနေ အီကာဒီ ကို ရဖို့ ဆငျတဲ့ အကှကျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ ။
ဒီ အပွောငျး အရှေ့ တကယျ ဖွဈလာ မယျ ဆိုရငျတော့ အငျတာရော နာပိုလီ ရော မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ရော ၃ သငျး စလုံး စိတျကနြေပျမှု ရရှိ စမှော အသေ အခြာ ပဲ ဖွဈ ပါလိမျ့မယျ ။
ပေါ့ဂ်ဘာကို အရမ်းပဲ နှစ်သက်ကြောင်း အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြားသွားတဲ့ #ဆာရီ
ဂျူဗင်တပ် အသင်းဆီ ဘယ်သူ့ကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ #ဒီလစ်
Juventus ကို ပြောင်းရွှေ့လာမှုဟာ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ဒီလစ် ပြောဆို